Tinokoka zvitoro zvemaruva kuFloristum.ru
- vatengi vatsva pasina muripo!
Floristum.ru inopa maturusi anoshanda kukwezva vatengi vatsva vezvitoro zvemaruva uye ma florist pasina muripo.
Iyo sevhisi iri nyore kwazvo kushandisa:
Isa ma bouquets kune system.
Gamuchira mirairo mitsva.
Kunyoresa uye kushanda muhurongwa hazvidi chero mubhadharo.
Iko hakuna kudikanwa kwekuisa mari muhurongwa, uyezve, iro basa rekuisa mari haripihwe.
Kunyoresa kuri nyore,
izvo zvinotora zvisingapfuure mineti, uye iwe unogona kubva waisa ako maruva kuFloristum.ru uye ugamuchire mirairo mitsva.
Zvishoma zvinodikanwa zvehunyanzvi michina yevaflorist uye vatakuri.
Zvese zvaunoda kuti ushande nehurongwa uye kupedzisa odhita chero foni, kunyangwe iri nyore kupusha-bhatani. Izvi zvinogoneka nekutenda kune yakapusa ergonomic SMS-yakavakirwa ziviso uye kurongeka manejimendi sisitimu iyo isingade kuiswa kweanokumbira pane mafoni eva florists uye vatakuri.
Mhinduro kubva kune vatengi mune wongororo.
Kuti uwedzere kutengesa, zvakakosha zvakanyanya kuti unzwisise kugutsikana kwemutengi nekuunza maruva. Floristum.ru inokurudzira mumwe nemumwe mutengi kuti asiye chirevo nezvegakagamuchirwa.
Unogona kutengesa maruva kuFloristum.ru kana:
Wakagadzirira kushanda sesangano repamutemo nekutamisa bhangi.
Iwe une rako rekutakura sevhisi kana iwe uri mudiwa wechero rekutumira masevhisi.
Isu tinobvumirana neiyo system Commission: 20% yemabouquets, 10% yemaruva pachidimbu.
Isu tinoona shamwari yedu inochengetera seizvi:
Vafambidzani veFloristum.ru zvirokwazvo havangasiye mutengi wavo asina maruva, ivo vanogara vakaremekedza uye vasingatyi chero matambudziko. Zvitoro zvinoitirwa kugara zvichinatsiridza hunhu hwebasa ravo, mhando yebasa, vakagadzirira kusimudzira pamwe neiyo portal.
Tinokurudzira zvitoro zvine wongororo dzakanaka:
PaFloristum.ru, vatengi vanogona kusiya mhinduro pamusoro pekuti vadii basa racho, kugutsikana kwavo nehunhu hwekutakura. Ivo vanogona zvakare kupa rakakodzera giredhi. Maererano nehuwandu, inopfuura hafu yevatengi vanozviita, uye ndiwo marongero ezvitoro nemhizha. Uye pahwaro hwayo, mhizha uye zvitoro zvemaruva ine chiyero chepamusoro ndivo vekutanga kuoneka mune yekutsvaga saiti.